Kohia - kụrụ ma lekọta ubi - Ube na-efe efe - 2019
Kohia - icho mma ahihia gi
Obere ndi oru ubi maara kedu ihe kohia yiri. Ma n'onwe gị, ma ọ bụ foto nke osisi sitere na brooms e mere, nwere ike ịhụ ihe niile. Kohia na-adọrọ mmasị ma na-egbuke egbuke na-enye ohere ọ bụla a na-enweghị ike iji mee ihe. Ekele maka ndị na-azụ anụ, osisi ahụ, nke e jibu mee ihe na-eme brooms, taa achọtawo ndu ọhụụ, nke nwere ọtụtụ agba ọkụ. Kohia - nke a bụ ihe agwụla maka mgbanwe nke ubi gị, naanị gị nwere ya ọdịda na nlekọta ọzọ kwesịrị ekwesị maka ya. Anyị ga-atụle nke a.
Nlekọta zuru oke maka bushes kohii
Kwachaa na ohia ohia kohii
Njikọta na osisi ndị ọzọ na nhazi ihuenyo
Ojiji nke kohii na ebe di iche
Cochia pesti akara
Ụkpụrụ nchịkọta nke ịkọ kohii
Ekwhii na-eto eto bụ usoro na-adọrọ adọrọ. Nke a na osisi ama mma-udo ebe. Ma ọ bụrụ na ọ dịghị ebe dị otú ahụ n'ime ogige ahụ, mgbe ahụ ghara ịda mbà, a ga-akụkwa korhia na ebe ndị gbara ọchịchịrị. Ajụjụ kacha mkpa bụ ma ọ ga-enwe ìhè site n'oge ruo n'oge. Ọ bụrụ na ị na-anapụ osisi nke anyanwụ kpamkpam, ọ ga-eji nwayọọ nwayọọ belata mmepe ahụ.
Ọ dị mkpa! N'ime ọhịa, kohia na-eto na ebe ọzara. Nke a bụ otu n'ime atụmatụ nke nsị ya.
Mgbe ị na-akụ kohiyu? Ndị na-emepụta mkpụrụ na-akụ mkpụrụ ahụ site na March ruo April 20. Na kụrụ n'ala na njedebe nke May. Ya mere, a pụrụ itinye kohia na ndepụta nke ihe ọkụkụ ndị a na-egbute seedlings na March.
N'ihe banyere ala, kokhiya dị oke ala. Ọ ga-agbanye mgbọrọgwụ ọbụna n'ala ahịhịa na-adịghị mma. Mana Kohiya anabataghị ala acidic na mmiri mmiri. Elu nke ndị okenye okenye kohii si 75-100 cm.
Ndị na-akọ ubi maara ihe na-egosi na Osisi a bu nnwere onwe-ima. N'ebe ndị mepere emepe, na enweghị "ndị agbata obi", kokhiya na-eto nke ọma karịa nso ndị ibe ya ma ọ bụ osisi ndị ọzọ. Ọ bụ ebe sara mbara nke na-enye Kochia aka iwelie ọnụ ọgụgụ vegetative. Ọ bụrụ na osisi ndị ọzọ gbochie ohere, osisi ahụ malitere ịmalite oge tupu oge eruo, ma ihe ndị a na-achọ mma nke okooko osisi ya anaghị amasị ya. Nke a na-akọwa eziokwu ahụ Kohiya enweghi ike itolite n'ime ulo.
Ị ma? Osisi kasị ochie n'ụwa, na-eto ruo taa, bụ osisi pine na United States dị afọ 4500.
N'oge oge vegetative, kohia kwesịrị ịtọpụ ya, weeding, ịgbara ala na ịzụ nri na ịnweta nri. Uwe elu kachasị mkpa ga-abanye na nke mbụ n'ụbọchị nke iri mgbe ịmaliteghachi na mbara ala, na oge nke abụọ - otu ọnwa mgbe e mesịrị.
Ọ dị ezigbo mkpa ịmepụta mmiri na-enweghị kohii na mmiri ozuzo enweghị. Nke a dị mkpa iji gbochie okooko na oge nke obere ornamental. Mgbe okpueze kpụworo na kpụ ọkụ n'ọnụ, ị nwere ike ịzụ shrub na nitrogen fatịlaịza. Ọ bụrụ na ohia anaghị eri nri, ọ ga-agwụ. Na ezughi oke atọ epupụta dara njọ.
Ọ na-enwekwa mmasị na ala nke ọma, osisi ndị dị na ya ga-etowanye nke ọma.
Dịka e kwuru n'elu, Kohiya na-anabata okechaa. Enwere otu ajụjụkedu ka mma osisi cypress na-eto eto.Karịsịa ebe ọ bụ na ị nwere ike inye ya ihe ọ bụla yiri nke ga-adị ogologo oge.
Ogologo oge ka e mepụtara ma ruo taa, a na-eji osisi ntutu osisi, gụnyere Kokhii, n'ụdị ihe dị iche iche na ọnụ ọgụgụ. Site na ihe ntanye, na mgbakwunye na ịkwa osisi, ị ga-achọ ụdọ na slats.
Ihe kachasị mfe bụ mpaghara ahụ. Iji mepee akpa cube nke kohii na mpaghara nke 1 m, a choro osisi ise. Ọ dị ha mkpa ịdabata na akụkụ nke square na anya nke 80 cm. Anụ nke ise a kụrụ kpọmkwem n'etiti. Mgbe ahụ, a na-emepụta akụkụ nke ọhụụ n'ọdịnihu na ala ma na-ewu ihe. Nke mbụ, a na-eme ihe na-adịghị mma: a na-ahapụ akụkụ nke akụkụ abụọ nke centimeters n'elu osisi. Ịkpụ isi na-amalite site n'elu ma na-aga n'ihu n'akụkụ. "Dị ọcha" na-amalite nanị mgbe ịchọrọ elele anya nke ike.
Ọ dị mkpa! Dị ka ọnụ ọgụgụ si kwuo, a ga-ebipụ cochia kwa izu abụọ, ma ha dabere na ihe onye ọrụ ubi chọrọ ịnata n'ihi ya. Na-eto eto a bụ ezigbo ihe ijuanya ọbụna maka ndị ọrụ ugbo nwere ahụmahụ.
Kedu esi egbutu Kohya n'ụdị bọl? Ka anyị kwuo ozugbo na akpụle ntutu a Kochia na-eme "site na anya". Maka ndị na-eto eto na nke mbụ, anyị na-atụ aro ka ị buru ụzọ kpochaa ya, wee kpochapụ ya ma gbanwee ya na ọdịdị nke a. Mgbe ị mụtara ime ka bọl si kohii, ọ ga-adịrị gị mfe belata anụ ọhịa, dịka ọbọgwụ na nwa atụrụ. Ma, n'ezie, atụmatụ dị iche iche nke ugwu ugwu, nkume nkume na ugwu nta.
Ịmepụta kọlụm ma ọ bụ cylinder ohia ga-etolite n'otu ebe na-enwu gbaa n'akụkụ niile. Tupu ịmalite ịkpụ osisi ahụ, gburugburu gburugburu ebe osisi ahụ na-etinye slats - nke a ga-abụ etiti. Na-eduzi ntutu isi, na-apụ na ọnụ ọgụgụ ahụ mgbe mgbe na nyochaa ma ọ na-apụta ma ọ bụ na ọ gaghị.
Ọ dị mkpa! N'oge ị na-afụ ya, jide n'aka na ọnọdụ nke agha ahụ dị nnọọ elu.
Iji kpoo kohiyu na cone, i kwesiri idido gburugburu ya. Dezie ọtụtụ ụzọ ndị nduzi na-ebugharị ma tinye ya n'elu. Mgbe ịkpụ ntutu, gaa na gburugburu site n'elu ruo ala. Gbalịa ime ya dị ka o kwere mee.
Iji mepụta gburugburu site na kohii, ọ ga-ewe ọtụtụ afọ. Kochia na-akpụ isi ga-eme na nkebi abụọ. Ná mmalite, e guzobere osisi ahụ dị ka ọdịdị dị mma. Otu eriri na-egbuke egbuke, nke dị iche na agba, jikọtara ala nke ogwe kohii ma gbaa ya gburugburu. Kwesịrị iji nlezianya nọgide na-enwe akụkụ nke ọchịchọ na anya n'etiti eriri. Ọzọ, dozie eriri ahụ n'elu. Ikwanye osisi ịkwa osisi kwachaa. Mgbe na-agafe site na trellis isi, na-akpụ agba gburugburu.
Ị ma? Okwu mbu "borscht" bu ihe eji eme ihe n'onu osisi Siberia nke hogweed. O so na otu ofe dị ka isi ihe. Mgbe e mesịrị, n'echiche a, borsch ejighị ya mee ihe.
Azu nke kohii malitere igbasa mkpuru, nke a na-akụ ya na ulo n'ime etiti March. Mkpụrụ ahụ anaghị adị nro, ma ọnọdụ Spartan abụghị maka ya. Ọ dị mma ịrapara na okpomọkụ nke 18-20 Celsius C. Ya mere, ọ ka mma ịkụ mkpụrụ ahụ na griin ha, mgbe ahụ, mgbe ha na-eto na seedlings, nyefee ha ka ha mepee ala. Enwere ike iji cochia nke na-amalite na-eto eto nwere ike igbu ya site na mmiri oyi nke March.
N'ịdọpụ mkpụrụ osisi ndị dị n'ime ala, ọ dị mkpa ka ị mee nsị centimeter ma hapụ ebe dị anya n'etiti ha na-erughị 30 cm. Mkpụrụ osisi chọrọ ìhè karịa na mbụ. Ọ dịghị mkpa igwu miri n'ime ha, pịa ya na ala. A ghaghị inye ha mmiri. Na enweghị mmiri mmiri ga-efu ike.
Mgbe oke nke seedlings dị ihe dị ka 7 cm, oge eruro iji bulie ha, n'ihi ya, ị ga-ama esi esi dive kohiyu.A maara ọkọlọtọ ịzụlite usoro mgbọrọgwụ nke osisi ma wusi mgbọrọgwụ na ịkpụ. Dị ka osisi ndị ọzọ, Kochia na-agbaba n'ime ite dị iche iche na ọdịdị nke ọtụtụ akwụkwọ. Enwere ike ibughari ya n'ime otu buru ibu ka ha wee gbasaa n'enweghi nsogbu n'etiti onwe ha.
Maka transplanting seedlings, igwu ha ọnụ na ala na-enweghị na-emebi na-eto eto mgbọrọgwụ. Na-elekọta seedlings na mgbe ị na-ebu ruo na njedebe nke May, rue mgbe ọ ruru 20cm.
Kohia na-emepụta ihe nkiri na-enye nanị ebe a na-akparaghị ókè maka mgbaba efu. A na-eji osisi eme ihe maka ebe e guzobere ogige, imewe nke flowerbeds, ala nke akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ. Mgbọrọgwụ oge okpomọkụ na-eji ihe ọ bụla mepụtara na alpine slide mma. Kochia ga-eme ka ihe ọ bụla na-esere ya. A na-enwe mmetụta siri ike na ogige rose. Nchikota nke kohii na lavender na onu ogugu ndi mmadu ga-eme ka ndi agbata obi gi kwoo ekworo. Zigzag ngere, ihe oyiyi dị egwu na ọdịdị geometric, ọbụna obi na nhụjuanya a gwụrụ nwere ike bechapụ na kohii.
Kochia, nke a kụrụ n'ime akwa akwa, gbanwere ihu ọma ya. Kochia bụ chameleon n'oge. Ndị na-emepụta ihe nkiri nke ọma a. N'oge okpomọkụ, ọ na-arụ ọrụ dị ka akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ; n'oge ọdịda, agba na-agbanwe na-acha odo odo na ọbara ọbara, nke na-ele anya na mmabbs. Na na Nchikota na chrysanthemum Kohia bụ nanị ọmarịcha. Na floristics, a na-etinye alaka ndị kohii ka ha ghọọ akwa. A na-ehichapụ akụkụ ndị a na-ehicha ma jiri ya mee ihe dị iche iche.
Ị ma? N'ebe ndị dị na Brazil, osisi na-etolite, ihe ọṅụṅụ ya na-eji mmanụ diesel dochie ya. Copaifera langsdorffii na-arụpụta ruo lita 50 nke mmanụ ụgbọala kwa afọ. Ọ bụ ihe na-abaghị uru na-eto eto na nnukwu ọnụ ọgụgụ, ma ọtụtụ ndị ọrụ ugbo nwere ike ikpuchi ụgwọ nke soybean site n'ịkụ ọtụtụ osisi dị otú ahụ.
Kohia bụ osisi shrub mara mma ma ọ bụ okpueze n'ụdị ya. Ọ dị oke ka otu a kụrụ, na dịka akụkụ nke akwa akwa. Dị ka ihe na-emesi ike na rabatkah, mmewere nke n'ihu ubi na hometead mixborders. Ezi osisi na-achọ mma.
Kochia ga-achọ ogige ahụ dị elu, alpine slide ma ọ bụ na-ejigide mgbidi. Na-akụ kohiyu, ị nwere ike ịmepụta oke mma dị gburugburu ebe nchekwa nke akwa akwa, n'okporo ụzọ ma ọ bụ gburugburu akwa ifuru. Ma, ọ kachasị mma ịkụ ya n'akụkụ nkume ma ọ bụ mepụta otu ihe mebiri emebi. Kochia rutere n'ọdụ ụgbọ mmiri ma mee ogige.
Na mgbakwunye na ojiji nke nhazi ihu ala Kochia jiri mee ihe kwa ụbọchị. Site na osisi shrub a na-etinye ike ma dị egwu ruo ogologo oge, nke mere aha ahụ bụ "venic grass" rapaara ya.
Echeghị kohii na homeopathy. Ọgwụ ndị dabeere na osisi a na-eme eczema, ọrịa nke usoro urogenital, erysipelas nke akpụkpọ ahụ, ọzịza na rheumatism. Cochia decoctions zuru ụda olu. A na - ewere ya dị ka diuretic na ụkwụ, diaphoretic na laxative.
Na nkà mmụta sayensị China na ndabere nke kohii na-emepụta ointments na-agwọ ọrịa dị iche iche anụ ọrịa na ntu ọrịa. A na-eji akwụkwọ nri kohii mee ihe na nri, a na-etinye ha na klas mbụ. Nakwa shrub a na-eri nri anu mmiri na anụ ụlọ.
Ị ma?Osisi dị na mgbọrọgwụ kachasị njọ na-eto na Sweden, afọ ya dịkwa afọ 9000.
Ihe kachasị njọ ma ọ bụ dị ize ndụ nye Kochia bụ ọnyà ududo. Ọ bụrụ na ọkpụkpọ ahụ dị mkpa na-apụta na epupụta nke osisi, ọ pụtara na ọrịa na-awakpo ya. Iji mebie ya, ọ dị mkpa ịgwọ shrub nwere ọgwụ ahụhụ, dịka ọmụmaatụ, Neoron. A na-agbaze otu milliliter nke ihe na liter nke mmiri. Nhazi ma na-ekpeghachi mgbe izu abụọ gasịrị.
Dị ka ị ghọtara site na njem anyị dị mkpirikpi, ịzụlite kohii na ilekọta ya ọzọ anaghị achọ mgbalị dị ukwuu. Anụ osisi shrub na-eleba anya maka ọdịdị ya dịgasị iche. Na unpretentiousness na nnukwu nsogbu na ọrịa dị iche iche na-eme ka nlekọta nke kohia n'ime obi ụtọ.
Ọkara mbubreyo nduku iche iche Aladdin: àgwà, nkọwa nke ụdị, foto
Nwa nke nne na nna a ma ama - Jonagold apple apple
Na-etolite ma na-elekọta tigridia ifuru
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Kohia - icho mma ahihia gi